ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သော ကောက်နှုတ်ချက်များ ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် ၂၀၁၀ အောက်တိုဘာလထုတ် မြန်မာ့တမန်မဂ္ဂဇင်းတွင် ယုံရှမ်း (ရှင်ဘွေယန်မြို့) က ကမ္ဘာ့ထင်ရှားကျော်ကြားသူများရဲ့ မှတ်ချက်ကို ပြန်လည်တင်ပြပါသည်။ စစ်မှန်သောခေါင်းဆောင်မှု ဆိုတာဘယ်လိုလည်း? ခေါင်းဆောင်မှုသည် ရာထူးမဟုတ်၊ အထူးအခွင့်အရေးတစ်ရပ်လည်းမဟုတ်၊ တာဝန်ရှိခြင်းတစ်ရပ်သာဖြစ်သည်။ (Peter Drucker)
ခေါင်းဆောင်မှုတစ်ရပ်ရဲ့အလုပ်ဟာ ခေါင်းဆောင်တွေကို ပိုပြီးမွေးထုတ်ပေးဖို့ဘဲ၊ နောက်လိုက်တွေပိုမွေးထုတ်ဖို့ မဟုတ်ဘူး။ (Ralph Nadar) ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ အနာဂတ်အမြင်ကိုပိုပြီးမြင့်မားကျယ်ပြန့်စေတယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ကို ပိုပြီးမြင့်မားစေတယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ သာမန်အကန့်အသတ်တွင်းရှိတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ပိုပြီးမြင့်မားစေတယ်။(Peter Drucker)
This entry was posted on November 12, 2010 by thawngno in Articles Christian Life, Christianity Related Articles and tagged Leadership, Myanmar Taman.	Shortlink